Kooxaha Liverpool Iyo Man United Oo Ku Dagaalamaya Saxiixa Laacib Ka Tirsan Kooxda RB Leipzig Ee Ka Ciyaarta Horyaalka Bundesliga.
HomeSuuqa kala iibsigaKooxaha Liverpool iyo Man United oo ku dagaalamaya saxiixa laacib ka tirsan kooxda RB Leipzig ee ka ciyaarta horyaalka Bundesliga.
December 1, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Daafaca kooxda RB Leipzig Dayot Upamecano ayaa dabka ku sii shiday wararka xanta ah ee sheegaya inuu u dhaqaaqi karo kooxda Manchester United xagaaga soo aadan kadib qoraal oo soo dhigay bartiisa Instagram oo la xiriirinaya inuu u dhaqaaqayo Old Trafford.
Waxaa lagu burburin karo 40m qandaraaska 22 jirkaan reer France, dhamaadka xilli ciyaareedkan markii oo furmo suuqa kala bisha janaayo ayaa loo badinaa in oo ka tago kooxdiisa, waxaana ku hardamaa kooxo badan kuwaa oo la rumeysan yahay inay xiiseynayaan helitaanka xidiga.
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay la dagaallanto Red Devils, in kasta oo kooxda heysata horyaalnimada Jarmalka ee Bayern Munich la sheegayo inaysan awoodi doonin inay la saxiixato xiddiga reer France suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan.
22 jirkaan daafaca ka ciyaara ayaa haatan ka dhawaajiyay inuu u dhaqaaqi karo Red Devils isagoo celin waayey jaceylka oo u qabo kooxdaas, waxa oo qoraal uu soo dhigay Instagram kaas oo soo jeedinaya in daafaca uu ku sii jeedo bartilmaameedka suuqa kala iibsiga ee kooxda macalin Ole Gunnar Solskjaer.
Daafaca RB Leipzig wuxuu ka mid ahaay kooxdii Jarmalka ee guuldarada 5-0 ka soo gaartay Red Devils Champions League horaantii ololahan.
Liverpool ayaa weli ah mid ka mid ah kooxaha ugu cadcad ee ku soo jiidan karta xiddiga reer France garoonka Anfield sida ay wararkii ugu dambeeyay sheegayaan.